Ny Toniziana mampiavaka sy mampiavaka dia ny toerana izay andehanan'ny maro amin'ireo mpiray tanindrazana amintsika ny fialantsasatra. Ny morontsirak'i Mediterane dia tena rivotra tsara. Fa ho an'ny maro, tsy io ihany no tanjon'ny fitsidihana firenena iray any Afrika Avaratra. Misy toerana tsara tarehy maro eto, ny sasany amin'izy ireo dia manana tantara marina ara-Baiboly. Koa, hiresaka momba ny fahitana an'i Tonizia izahay.
Carthage fahiny any Tonizia
35 km miala ny renivohitr'i Tonizia dia ny sisa tavela tamin'ny Carthage fahiny, izay tanàna lehibe fahiny sy manan-danja. Niorina tamin'ny 814 talohan'i JK izy io. Ireo mpizahatany dia atolotra mba hijery ny sisa tavela amin'ny sarcophagi romanina, vatosoa, sary sokitra, trano sy trano, na ny teatra.
Moske lehibe tany Kairouan, Tonizia
Any amin'ny tany efitra, ao Kairouan no moskea tranainy indrindra any Afrika. Ny Moske Lehibe dia naorina tamin'ny taonjato faha-7. Ao amin'ny tempoly dia sora-bavahady miisa sivy, ny tokotany dia voaravaka sary maromaro maromaro misy tsanganana 400. Any amin'ny tapany avaratra amin'ilay toeram-pitsangatsanganana dia misy minaret iray hektara manana haavo 35 m.
Neapolis sy ny tranombakoka archeolojia ao Nabeul, Tonizia
Neapolis dia iray amin'ireo toerana malaza indrindra any Nabeul any Tonizia. Tanàna fahiny, naorina tamin'ny taonjato VK tany avaratra, dia rava nandritra ny Ady III Punic. Ny tranombakoka archeolojia dia mampiseho ny sarimihetsika mahazatra, izay anisan'ny tanàna fahiny.
Ribat any Sousse , Tonizia
Amin'ny diany mankany Tonizia, ao an-tanànan'i Sousse, eo an-toerana, Ribat dia malaza kokoa. Io monastera miorina io dia naorina tamin'ny taonjato IX mba hiarovana amin'ny fanafihan'ireo mpandresy Byzantinina, taty aoriana ireo mpikomy. Eo amin'ny 1500 metatra ao ambadiky ny rindrina misy tilikambo semicircular misy sela, mandinika ny tilikambo.
Faritra Toniziana any Tonizia
Ho an'ireo tombontsoa mendrika ao Tonizia akaikin'i La Gulette, seranan-tsambo kely tsy lavitra ny renivohitry ny firenena, dia farihy Toniziana misy faritra 37 km & sup2, izay ahitanao ireo andian-jiolahim-borona, cormorants ary herons. Ny lakana dia nivezivezin'ny làlana iray izay nametrahana lalamby iray.
Park-safari "Phrygia" any Tonizia
Raha manam-potoana ianao, azonao antoka fa hitsidika any Tonizia manintona ny seranan-tsambon'i El Kantaoui - park-safari "Phrygia" ary toeram-pijerena "Hannibal-park". "Phrygia" no toerana masina voalohany any Afrika avaratra. Izy io dia trano efa ho 30 karazana biby, ohatra, tigra, girafes, liona.
Ny Synagoga La Griba any Tonizia
Ny malaza ao Djerba ao Tonizia no synagoga indrindra ao La Griba, toerana masina ho an'ny Jiosy rehetra. Etsy ankilan'izany, io sinagoga io dia mahagaga fa tsy mihoatra noho ny roa arivo taona monja. Eto ireo kisoa amin'ny iray amin'ireo antontan-taratasy tranainy indrindra amin'ny Torah, ary koa ny relics amin'ny mpanoratra ny Talmud Shimon Bar Yashai.
Ksary any Tonizia
Ao amin'ny tanànan'i Medenin dia afaka mahita toerana tsy misy fonenana ianao - ireo karbôna fahiny Berber fahiny. Ksars dia vondron'olona ao amin'ny 2, 3 ary na dia mihoatra aza, ny "efitrano" tsirairay dia efitra lava, izay mitarika varavarana goavana.
Katedraly St. Louis any Tonizia
Tsy lavitra ny sisin-tanin'i Carthage eo amin'ny tendrombohitr'i Byrsa no misy ny Katedraly majesty any St. Louis, nantsoina hoe Louis IX Mpanjaka Frantsay. Ny Tempoly amin'ny endriky ny lakroa latinina dia natsangana tamin'ny fomba ofisialy-moorisy. Ny fasana dia voaravaka tranobe roa mitovitovy amin'ny domes. Ao ambadiky ny katedralina dia misy ravina vita amin'ny stucco sy ny fitaratra misy fitaratra miaraka amin'ny orana arabo.
Bardo Museum ao Tonizia
Ao an-tanànan'i Tonizia no iray amin'ireo tranombakoka lehibe indrindra any Afrika - tranombakoka mozika romanina sy asa tanana hafa. Ny tranom-bakoka dia miorina ao an-tranon'ny Sultans Hafsidic tamin'ny taonjato faha-13. Ny fampiratiana indrindra amin'ny fampiratiana dia mozika 56 metatra toradroa. M.
Amphitheater any Tonizia
Araho tsara ny fitsidihana ny kianjan'ny amphitheater ao El Jem. Manana endriny mahatalanjona izy io, ary, eny an-dalana, no fahatelo lehibe indrindra eran-tany.
Raha nitondra an'i Tonizia ho any amin'ny lisitr'ireo firenena izay tsidihinao amin'ny vakansinao manaraka ianao, fantaro raha mila visa ianao hiditra ao amin'ny fanjakana.
Moske any Istanbul
Tempolin'ny Fitiavana, Inde
Vietnam dia fotoana fialantsasatra
Ny fahitana an'i Arkhipo-Osipovka
Weather in Dubai is a month
Goa: atsimo na avaratra?
Inona no ho hitanao any Saransk?
Benefitsa amin'ny paoma ho an'ny fahasalamana
Ny 9 Mey ho an'ny zazalahy
Shrimp amin'ny labiera
Ny knee-elbow position amin'ny fitondrana vohoka
Firy ny faharetana mety hisy?
Varavarana anatiny Wenge
Ahoana ny fomba hanavahana ny fiankinan-doha?
Segregation - karazana sy endrika
Beshbarmak ao amin'ny multivark
Faka mena - tincture
Sweets ho an'ny fahavoazana